La ngamaxabiso e-iPhone Xs kunye ne-XS MAX nge-Orange | I-Androidsis
La ngamaxabiso e-iPhone entsha ene-orenji
UEder Ferreño | | Iiselfowuni, Abasebenza ngefowuni
I-iPhone entsha esandula ukuboniswa ngu-Apple zezona zinto ziphambili kule veki. Iimodeli ezintathu ezintsha apho inkampani yeCupertino ifuna ukuvuselela uluhlu lweefowuni. Uyilo kunye nokucaciswa kweefowuni kuxoxwa kakhulu kwaye kuxoxwa ngazo, nangona lixabiso lezi fowuni zintsha zintathu elenza eyona mpikiswano.
I-Apple iye yahlaziya i-iPhone yayo ngokupheleleyo ezi modeli zintathu, ii-Xs kunye nee-Xs Max, ukongeza kwi-XR (ekubhekiswa kuyo njenge-iPhone enexabiso eliphantsi ngabasebenzisi abaninzi). Ukuphehlelelwa eSpain, ezi fowuni ngoku ziyafika kunye neorenji.
Kubasebenzisi abanomdla, I-Orenji iveza ezi modeli zisimahla kunye nentlawulo ehambelana nazo. Ke kuya kuba lula kakhulu kuwe ukuba ufumane indibaniselwano efanelekileyo efanele oko ukufunayo. Kuxhomekeka kwindlela oyikhangelayo, ixabiso lingakubuyekeza ngakumbi.
Ixabiso lasimahla (kubandakanywa neVAT) Ixabiso lentengiso ngezavenge (VAT ifakiwe)
Indawo yokukhwelela free Intlawulo yokuqala Intlawulo / inyanga
I-iPhone XS 64GB 1.159 € 42,50 €
I-iPhone XS 256GB 1.329 € 48,95 €
I-iPhone XS 512GB 1.559 € 57,50 €
I-iPhone XS MAX 64GB 1.259 € 46,50 €
I-iPhone XS MAX 256GB 1.429 € 52,95 €
I-iPhone XS MAX 512GB 1.659 € 61,75 €
I-APPLE BUKHELE S4 40MM 529 € 18,50 €
I-APPLE BUKHELE S4 44MM 559 € 19,75 €
IAPLELE BUKHELE NIKE S4 44MM 559 € 19,75 €
Amaxabiso akwitafile ngalawo oLuthando lweNtsapho luphela, Uthando loSapho olungenamkhawulo okanye amaxabiso oLuthando olungenamkhawulo. Nangona kunokwenzeka ukufumana ezi iPhones zintsha usebenzisa amanye amaxabiso eorenji. Intlawulo yokuqala yahlukile ngokuxhomekeke kwinqanaba, kodwa ungadibanisa nawo onke amaxabiso omqhubi.
Njengoko ubona, i-iPhone entsha ayiveli ngokungabizi kakhulu. Ixabiso eliphantsi kuzo zonke linamaxabiso asimahla e-1.159 euros, Into abasebenzisi abaninzi bayibona igqithile. Ucinga ntoni ngamaxabiso eefowuni ezintsha zeApple? Ukuba siyithelekisa neeflegi ezimbini ze-Android njengeGlass Qaphela 9 okanye iP20 Pro, amaxabiso aphezulu kakhulu.
I-Samsung Galaxy Note 9 yeyona modeli ilungileyo yenkampani yaseKorea ukuza kuthi ga ngoku, yaqhubeka ithengiswa nge-1088 euro eSpain. Ngelixa iHuawei P20 Pro okwangoku ifumaneka nge-735 euros kuhlobo lwayo lwe-128 GB. Ngamaxabiso asezantsi ngokukodwa kwiimodeli ezihamba kwicandelo elinye. Ucinga ntoni ngala maxabiso e-iPhone?
Ukusukela namhlanje kunokwenzeka ukugcina ezi modeli kwiorenji, kude kube kusungulwa ngoSeptemba 21.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Abasebenza ngefowuni » La ngamaxabiso e-iPhone entsha ene-orenji
INokia 3.1 iqala ukufumana i-Android 8.1 Oreo
Uyifumana njani ikhethini lesaziso se-Android P